interCaribbean Airways inotangisa itsva Punta Kana kuenda kuTortola kutiza
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » interCaribbean Airways inotangisa itsva Punta Kana kuenda kuTortola kutiza
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • British Virgin Islands (BVI) Nhau dzichipaza • Dominican Republic Kuvhuna Nhau • nhau • Press zvinoburitswa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
interCaribbean Airways yakazivisa yese-nyowani sevhisi yekubatanidza Punta Kana neTortola. Iyo sevhisi nyowani yakagadzirirwa kutanga muna Ndira 2020. Basa risingamire richashandiswa nendege EMB120.
Kuwedzera iyo Tortola kuenda kuPunta Kana nzira inobatanidza Tortola kuenda kuCaribbean inoshumirwa nendege zvakanyanya ichibatanidza zvimwe zveEurope, USA, Central neSouth America kupfuura chero imwe nhandare mudunhu iri. Nhasi Punta Kana inomiririra approx. 67% yevanosvika vese muDominican Republic. Iine USA Preclear nzvimbo yakagadzirirwa kuuya online, rwendo kubva kuTortola kuburikidza Punta Kana kune mamwe maguta akawanda muUSA, inoita iri suo rakanakisa kudzoka kuUSA sechiitiko chekuuya mudzimba.
FLT Kwete Kubva Kumazuva DEP ARR
JY414 Tortola Punta Kana Wed, Sat 12:00 13:10
JY415 Punta Kana Tortola Wed, Sat 13:40 14:50
Kuwedzera Tortola kuPunta kunoreva kuti maCaribbean anoshanda akawanda asingamire maguta asati abatanidza mikana yeguta kupfuura chero yendege. NePunta Kana aya maguta masere asingamire achienda kumaguta gumi ane basa rinotangwa kutanga kwegore ra2020.
interCaribbean yanga ichishandira Tortola kwemakore mana apfuura, ichiwedzera gore pagore basa rayo kumaguta akawanda uye mafambiro kunzvimbo dzinonyanya kukosha kuti ubatanidze neTortola.
Iyo British Virgin Islands Yevashanyi Board inofara kwazvo nekuwedzera kwePunta Kana kune interCaribbean 'BVI purogiramu. Isu tanga tichikurudzira uye tichishingirira kuwedzera kweiyi nendege kwemakore akati wandei, kupihwa mukana wakakura wepasi rose wemweya kuPunta Kana uye mukana wekuvandudza iyi seimwe nzira yekuenda kuBVI. Isu tine tariro huru yemikana mitsva iyo izvi zvinounza kuBVI apo isu tichivhura mamwe magedhi kuzvitsuwa zvedu